Apple ee iPhone 6 ayaa guul weyn dunida oo dhan. Iyada oo dad badan oo isagoo ku iibsaday iyo qaar badan oo weli safka si ay u soo iibsadaan, iPhone 6 u muuqataa in ay ku dhacay oo dhan chords xaq u leh dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee, wax badan oo iyaga ka mid ah ayaa la sheegay in dhibaatooyin kala carar ama qalabka ugu dambeeyay. Markii qaar ka mid ah ayay ku qaadatay u Apple inay qirtaan arimahan laakiin si kastaba ha ahaatee waxaan xaqiijineynaa in kuwaasi ay ugu dhaqsaha badan shaqeeyay doona. Inkastoo, waannu og nahay waxa ay qaadato xoogaa waqti ah ka hor inta aan helno update ka Apple loo qeybsado arimahan. Sidaas ee ku meel gaarka ah, halkaannu wada joognaa xal noo gaar ah ugu dhibaatooyinkan in aad laga yaabo in ay soo gudboonaado aad brand iPhone 6 cusub.
1: Sound qodxo marka aad isticmaalayso headphones
• afuufa galay dekedda headphone iyo sidoo kale nadiifiso Jack headphone si loo hubiyo in aysan jirin wax wasakh ah ama boodhka taasoo keentay in qodxo codka.
• Hubi in headphones ee aad isticmaalayso si fiican u xirnayn; waa in aad in aanay awoodin inay arkaan wax bir ah ugu sareysa, waana in si adag sida ay marka ku xirnayn oo dhan dhaqso ah.
2: qasdin bedesheen on Siri iyo mooraal soo noqnoqda cut
• Dadka ayaa soo wariyay in duubaya caag ah, cajalad iskooj ama dunta ilkaha xaallado yar gudahood, ku dhawaad ​​dhamaadkii sare ee Jack headphone ayaa wax ku ool ah la xalin dhibaato iyaga u.
• Haddii dhibaatadu ay weli sii socoto markaas waxa ay noqon kartaa sababta oo ah nooc ka mid ah qalad hardware ah. Aadida Apple xaaladan oo kale waa waxa soo socda fiican in la sameeyo sidii ay labada hagaajin lahaa arrinta hardware si joogta ah aad ama haddii kale ku siin dukaamada bedelka.
3: Colouring ee strips caag ah
• Iibso fiican kiiska / cover aad iPhone 6 xaq waqtiga iibsigu telefoonka; waa in laga hortago midab ah in la bilaabo.
• Haddii ay dhacdo in aad mar hore midab aad iPhone 6 markaas wax soo socda fiican in la sameeyo waa in la isticmaalo maro qoyan si meesha looga saaro Wasaqda dheeha aayar iyo samir. Xusuusnow in haddii aad go'aansato on isticmaalayo dareere ah nadiifinta ah nooc ka mid ah; taxaddar leh u screen iyo jirka intiisa kale ah.
4: Random daryaan iyo arrinta booting soo noqnoqda
• Ma u ah warshad-keddibna qasi lahaa isbedel kasta oo aan la rabin samaysay in goobaha telefoonka by app dhawaan soo bixi.
• Sidoo kale si loo hubiyo in dhammaan barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka la cusbooneysiiyaa in qoraalkii ugu dambeeyey.
5: keyboard Qalad hab Muuqaal
• Demi iyo telefoonka mar kale; haddii ay dhibaatadu tahay mid ku meel gaar ah ka dibna waxa loo xaliyo waa in.
• Tag Settings> Messages iyo furmaan doorasho ee kor Dhegayso sidii markii on Doorashadan ay kiciyaan oo laga yaabaa in ay si degdeg ah fariin maqal ah in ay dhacdo qoqobada iPhone.
• Ka dibna, u tag Settings> General> Helitaanka in ay xidhi doonto Qaabab Button. Ugu dambeyntii, u tag Settings> General> Helitaanka iyo demi ikhtiyaarka ah Zoom. Tallaabooyinkan waxay tahay in la xaliyo Dicumintiyo ah.
• Haddii aad weli ku haysta arin isku mid ah ka dibna waxa aanu soo jeedinaynaa la isticmaalayo halkii a keyboard xisbiga 3aad.
6: iPhone 6 Camera aan shaqayn
• Tag Settings> General> celi> celi Settings All - waa in la xaliyo arrimaha camera guud ahaan.
• Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay sidoo kale soo jeediyay in ay ahayd oo kaliya dib u soo celinta laga gurmad ah la dhigtay version weyn ee iPhone in ay bilaabeen in ay soo food saartay arrimaha camera ka dib; keddibna warshad shaqeeyo waa in ay dhacdo in this sidoo kale.
7: noqday screen Touch kaliftay
• Guuleysatey telefoonka by haysta hoos Hurdada iyo button Home wada ilaa logo Apple u muuqataa shaashadda.
• Hadda beddelaan telefoonka mar oo waxaad u tagtaan Settings> General> celi> celi Settings oo dhan (tani ma tirtiri lahaa xogta aad telefoonka, oo kaliya in laga yaabaa in aad geli sirta ah, isbedel wallpaper iwm).
8: Bluetooth aan shaqayn
• Marka ugu horeysa, ka saar oo dhan qalabka aadeen ka Bluetooth xiriir aad telefoonka ee. Tag Settings> General> celi> celi Settings Network si ay dib goobaha network ku saabsan telefoonka.
• Hadda hoos u hay badhamada Hurdada iyo Home wada ilaa wakhtiga aad hesho si aad u aragto logo Apple ah. Oo haatan isku dayaan in ay xubnuhu aad telefoon isticmaalaya Bluetooth la qalab kala aad rabto in ay ku xidhmaan.
• Haddii taasi aysan shaqayn, markaas dib warshad uu yahay habka keliya (hubi in aad dib aad telefoonka ka hor qabanayaan dib warshad).
9. No Touch ID ay dhacdo in adeegga lahayn
• kaabta qalab aad iyo in la xaqiijiyo in ay si buuxda uga soo eedeeyay.
• Markaas tagaan si ay Settings> General> Update Software iyo dooro Download iyo rakib.
• Tani waxay sidoo kale waxaa laga sameyn karaa iyadoo la Lugood leh qalab shidan galay your computer, Lugood soo xulay oo markaas xulashada Check u Update hoos Kooban qaybta. Marka la casriyeeyay si version 8.0.2 dhibaatadan waa in la saxo.
10. Screen is fudud u dillaac
• More ah qiyaas ka hortag badan xal, taas oo mid ka mid hubaal caawiyaa; kiis ilaaliya tayo wanaagsan u soo iibinno aad iPhone 6.
• Booqo Apple dukaanka u dhow meesha aad dayactir screen sameeyey $ 109 ama si aad iPhone 6 ah ka heli kartaa.
11. iPhone 6 is wada xodan yihiin meelo
• iPhone 6 waa qalab xasaasi ah iyo in aad is ogow waxa of Si kastaba ha ahaatee haddii aad kor ku dhamaaday in aad laaban iPhone 6 bartey, ha isku dayin in lagu dhiso on kuu gaar ah; la xiriir dhow ee Apple dukaanka isla markiiba, ay hubin doonaan telefoonka oo bal eega hadday bedelka lagu bixin karaa.
12. Error la kaarka SIM ('SIM aan saxnayn' ama 'kaarka No SIM rakibay)
• mar kale Toggle hab Diyaaradeed in ON iyo OFF ah.
• Guuleysatey aad iPhone 6
• Hubi haddii SIM-ka la burburay ama wasakh ah. Waa in aad nadiifiso xiriirrada oo dahab la tirtire ama maro jilicsan free marada ah.
• Hubi in software ku saabsan iPhone 6 ilaa taariikhda via Settings> General> About.
• Haddii dhibaatadu ay weli sii socoto waa in aad la xiriirtaa adeega bixiyaan ama Apple ay dhacdo in.
Arrinta 13. oogidda
• Isticmaal kale bareesada darbiga, cable iyo xeedho.
• Hubi in aad isticmaasho oo kaliya cable xukun rasmi ah oo xeedho derbiga ay bixiyeen aad iPhone 6.
• Hubi in dekedda amraya aad telefoon iyo cable yihiin kuwo nadiif ah oo boodh oo lacag la'aan ah.
• Waxa kale oo suuragal ah in isku xira ku cable markii jawi huurka leh ama qoyan hillaac is mirdhiyay karo. Sidaas fogaado isticmaalkiisa xaalado sida iyo tirtiraynaa kasta oo biyo ah in cable u yimaadeen laga yaabo in xiriir la.
• Dib u celi aad iPhone 6 marka la soo eedeeyay ay wada cadaadinaya badhamada Hurdada iyo Home ilaa logo Apple kacdo.
14. Ma awoodo in uu maqlo qofka kale ee call
• Hubi in aad sol Gudoomiyaha laguma xusin wax; kiiska telefoonka, gargaare shaashadda ama siigada saamayn ku yeelan kara tayada codka call a ah. Nadiif ah haddii loo baahdo la isticmaalayo burush yar oo jilicsan.
• Hubi in aadan ku xiran qalab kasta oo Bluetooth iyo furmaan Bluetooth via Settings kaliya si loo xaqiijiyo in.
• Mararka qaarkood badalista off feature buuqa la joojiyo kaloo ka caawisaa, u tag Settings> General> Helitaanka iyo xaqiijiyo in Qaylada Phone Cancelation ikhtiyaarka uu dansan yahay.
• Kadib markii uu dhamaystay oo dhan tallaabooyinka sida kor ku siin, wada riix badhamada Hurdada iyo Home in dib telefoonka ilaa aad aragto logo Apple ah.
15. Issue of ballaadhisay walxood / images
• Double tuubada shaashadda isticmaalaya 3 Farahaaga ku wada iyo in si caadi ah ugu noqon wax.
• Ka dibna, u tag Settings> General> Helitaanka iyo furmaan ikhtiyaarka Zoom.
16. dhibaato ah ee Red Screen
• Haddii ay tahay arrin software ah, waxa loo hagaajin karaa iyadoo la soo celiyo; wada riix badhanka Home Hurdadana ilaa aad aragto logo Apple ee ku saabsan 10-15 ilbiriqsi. Marka telefoonka damiso, xerto your computer la nooca ugu dambeeya ee Lugood waxa ku jira oo ku biiray telefoonka. Marka xiran Lugood, raacno soo celiyo nidaamka.
• Haddii ay tahay dhibaato hardware ah, ka dibna si fudud u soo xiriir Apple si aad u hesho bedelkiisa diyaarin.
> Resource > iPhone > Major Dhibaatooyinka iPhone 6 iyo sida loo dayactir